प्रकाशित मिति १६ मंसिर २०७५, आईतवार १५:२९ लेखक नेपाली जनता
सैनिक नियमावली संशोधनले जर्नेल–कर्णेललाई हाइसन्चो
काठमाडौं। नेपाली सेनाका प्रधानसेनापति पूर्णचन्द्र थापाको कार्यकालको प्रारम्भमै सैनिक सेवा नियमावलीको पहिलो संशोधन, २०७५ जारी भएको छ । सैनिक…
कुलमानको नेतृत्वमा तीन वर्ष अघि यसरी संभव भएको थियो लोडसेडिङमुक्त तिहार
काठमाण्डौ । लोडसेडिङमुक्त तिहार मनाउन लागिएको तीन वर्ष भएको छ।
नेपाल विद्युत् प्राधिकरणले २०७३ को तिहारको लक्ष्मीपूजाका दिनबाट परीक्षणका रूपमा…
कर्मचारीको अवकाश उमेर ६० वर्ष !
काठमाडाैं । संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले निजामती, स्वास्थ्य सेवा र संसद्सहित सबै सेवाका कर्मचारीको अवकाश उमेर ६०…
४-३ जितसंगै फ्रान्स अन्तिम ८ मा, अर्जेन्टिना बाहिरियो
एजेन्सी । विश्वकप २०१८ अन्तिम १६ को पहिलो खेलमा फ्रान्सले अर्जेन्टिनालाई ४-३ ले हराएको छ । फ्रान्सको जितमा युवा…
विमान दुर्घटना: अझै भएन शव हस्तान्तरण, कुरिरहेका आफन्त आक्रोशित !
काठमाडौं । बंगलादेशको एयर युएस बंगलाको विमान दुर्घटनामा मृत्यु भएकाको पोस्टमार्टम सकिएको छ।
‘४९ मध्य २३ वटा शवको फिंगर प्रिन्ट…
अब महन्थ ठाकुर सभामुख !
काठमाडौं । सत्तारुढ नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा)ले राष्ट्रिय जनता पार्टी अध्यक्ष मण्डलका संयोजक महन्थ ठाकुरलाई प्रतिनिधिसभा सभामुखको प्रस्ताव…
तयार हुनुस् लोकसेवा परीक्षा लेख्न, १४ हजार विज्ञापन खुल्दै
यसरी बुझे पत्रकारले नालायक महानगरका मेयरको दानापानी, प्रधानमन्त्रीले बहिष्कार गरे 122 views
काे-काे लिन्छन् घरधनी सांसद र मन्त्री क्वार्टर बस्ने मन्त्रीले संसदबाट घरभाडा 114 views
समिटमा ठुला नेताले विदेशि अतिथिसँग भेटेको र सम्पादकहरुले हायतमा रक्सी पिएको फोटो वाहिर ल्याउः एकनाथ ढकाल 25 views
फेवातालमा खसेका युवाको शव फेला पर्यो 24 views
सैनिक नियमावली संशोधनले जर्नेल–कर्णेललाई हाइसन्चो 22 views
१९४७ को त्रिपक्षीय असमान सन्धी र सम्झौता विरुद्धको अभियानलाई साथ दिन आम नेपालीलाई आग्रह गर्दछौः पदम सुन्दर लिम्बु(भिडियो सहित) 17 views
एयर एसियाले बुझाएको साढे ११ करोड हिनामिना, संम्लगन कर्मचारीहरू केन्द्रमा 11 views
भारतमा ३३ किलो सुन बरामद, नेपालमा सुन थाल्यो अनुसन्धान समितिले !9views
यसरी फस्छन निर्दोष डाइभर साउदी अरवमा7views